Sellfy: wulite ngwaahịa ire ere ma ọ bụ ndebanye aha gị n'ime nkeji | Martech Zone
Sellfy: wulite ngwaahịa ire ere ma ọ bụ ndenye aha gị n'ime nkeji
Tọzdee, Disemba 14, 2021 Tọzdee, Disemba 14, 2021 Douglas Karr
Na-ere bụ ihe ngwọta eCommerce dị mfe maka ndị na-emepụta ihe na-achọ ire ngwaahịa dijitalụ na anụ ahụ yana ndenye aha na-ebipụta na-achọrọ - niile sitere na otu ụlọ ahịa. Ma ọ bụ eBooks, egwu, vidiyo, nkuzi, ngwa ahịa, ihe ndozi ụlọ, eserese, ma ọ bụ ụdị azụmaahịa ọ bụla ọzọ.
Bido ngwa ngwa - Mepụta ụlọ ahịa na ọnụọgụ abụọ. Debanye aha, tinye ngwaahịa gị, hazie ụlọ ahịa gị wee dịrị ndụ.
Too nnukwu - Jiri atụmatụ ịre ahịa arụnyere n'ime ka itolite ahịa na azụmaahịa gị. Ma ịchọrọ mbelata, ire ahịa ngwaahịa, ma ọ bụ ọrụ email, Sellfy ekpuchila gị.
Na-ere ebe ọ bụla - Nweta ndị na-ege gị ntị wee ree ozugbo na mgbasa ozi ọha, weebụsaịtị nke gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ nwere n'ihu ụlọ ahịa omenala.
Na-ere ndị okike nwere ike jikọọ ụlọ ahịa ha na webụsaịtị dị adị, jiri ụlọ ahịa ha dị ka ngalaba isi, ma ọ bụ chụpụ okporo ụzọ site na ọwa ndị ọzọ na-adọrọ adọrọ. Zụta ugbu a bọtịnụ na nhọrọ ndị ọzọ embed. Na-ere na-abịa na ọmarịcha ngwa ahịa etinyere n'ime ya (ịre ahịa email, coupons, mbelata ego, ịgbahapụ ụgbọ ibu, iwe iwe) na nyocha. Ọzọkwa, ọ ga-ekwe omume iji Zapier jikọọ na 2000+ ngwa ndị ọzọ.
Gịnị na-eme Na-ere dị iche bụ na anyị na-elekwasị anya n'ịdị mfe. Ị nwere ike wuo ụlọ ahịa na-arụ ọrụ nke ọma n'ihe na-erughị nkeji ise. Ị ga-ahụ Na-ere dị mma ma ọ bụrụ na ị bụ onye na-eji kpọrọ ihe mfe iji ma achọghị itinye oge mmụta.
Na-ere na-enye atụmatụ efu maka ire ngwaahịa ebipụta na-achọ na anụ ahụ. Na atụmatụ niile na-abịa na-enweghị ụgwọ azụmahịa. Enwere atụmatụ atọ ọzọ dị: Starter, Business, na Premium. Atụmatụ ndị a nwere ọnụ ahịa a kapịrị ọnụ kwa afọ ma ọ bụ kwa ọnwa-enweghị ụgwọ ezoro ezo ma ọ bụ ụgwọ azụmahịa.
Bido Ọnwụnwa efu gị
Ngosi: Abụ m mmekọ Na-ere na m na-eji njikọ njikọ m n'ime akụkọ a.
Tags: agbahapụ agbahapụKupọnsngwaahịa dijitalụndebanye aha dijitalụegoecommerceahia ecommerceecommerce n'elu ikpo okwuemail Marketingnjikwa mmụtaerefyna-akpali akpali
Calendly: Otu esi etinye Popup ma ọ bụ kalenda agbakwunyere na webụsaịtị gị ma ọ bụ saịtị WordPress gị.
Otu esi emepe webụsaịtị, ecommerce, ma ọ bụ atụmatụ agba ngwa ngwa